खोप सम्बन्धि जिज्ञासा : खोप लगाउनुपूर्व तथा लगाएपछि के गर्ने ? दीर्घरोगीले खोप लगाउने कि नलगाउने ? खोप सम्बन्धि जिज्ञासा : खोप लगाउनुपूर्व तथा लगाएपछि के गर्ने ? दीर्घरोगीले खोप लगाउने कि नलगाउने ? Canada Nepal
नेपालमा संक्रमितमध्ये ८८ प्रतिशतलाई ओमिक्रोन भेरियन्ट रहेको पुष्टि
काठमाडौं - नेपालमा संक्रमितमध्ये ८८ प्रतिशतलाई ओमिक्रोन भेरियन्ट रहेको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ८८ प्रतिशतलाई ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पछिल्लोपटक गरिएको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा ८८ प्रतिशतलाई ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले जानकारी दिए ।
३२ वटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा २८ जनामा ओमिक्रोन देखिँदा चारवटामा भने डेल्टा भेरियन्ट रहेको सहप्रवक्ता डा अधिकारीले जानकारी दिए ।
माघ ९, २०७८ आइतवार १८:०६:०९ बजे : प्रकाशित
५० जना बढी स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएपछि टेकुमा खोप कार्यक्रम स्थगित
काठमाडौं - शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ ।
आइतबार अस्पतालले एक सूचना जारी गर्दै खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी गराएको हो । अस्पतालले सुचनामा अस्पतालमा कार्यरत ५० जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोले खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताएको छ ।
अस्पतालले सात दिनसम्मका लागि खोप कार्यक्रम स्थित गरिएको सूचनामा जानकारी गराएको छ ।
माघ ९, २०७८ आइतवार १९:३३:४० बजे : प्रकाशित
एजेन्सी - कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनले कोभिड १९ महामारीलाई नयाँ चरणमा लगेको र चाँडै नै यो महामारी अन्त्य हुने विश्वास विश्व स्वास्थ्य संगठनका निर्देशकले गरेका छन् ।
माघ १०, २०७८ सोमवार ०८:४३:१३ बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ३१९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । २१ हजार २०१ जनाको परिक्षण गर्दा मुलुकभर थप १० हजार ३१९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ९ लाख १८ हजार ४ सय ४८ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) १ लाख १५ हजार १ सय ७८ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा २५ सय ४० जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ८ लाख २४ हजार २ सय ३९ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित ८२ हजार ५ सय ५० जना रहेका छन्।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ६ सय ५९ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
माघ १०, २०७८ सोमवार १८:०१:४५ बजे : प्रकाशित
एजेन्सी - विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको ओमिक्रोन अन्तिम भेरियन्ट भनेर सोच्नु गलत भएको बताएको छ । संगठनले ओमिक्रोन कोरोनाको अन्तिम भेरियन्ट रहेको र हामी महामारी अन्त्यको अन्तिम चरणमा छौं भनेर सोच्नु खतरनाक भएको बताएको छ ।
डब्लूएचओका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडहनर्म गिब्रयेससले यसका लागि अलग अलग परिदृश्य रहेको बताए । कोरोना महामारी कसरी समाप्त हुन्छ र यसको प्रसार कसरी समाप्त हुन्छ भन्नेबारे उनले केही खुलाएनन् ।
उनले ओमिक्रोन अन्तिम नभएको भन्दै यसपछि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट आउन सक्ने बताए । उनले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नका लागि त्यस्तो परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको जसका कारण महामारी फैलिएको बताए ।
माघ १०, २०७८ सोमवार १८:४६:१६ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुमा मंगलबारदेखि खोप अभियान फेरि सञ्चालन हुने भएको छ । मंगलबारदेखि पुन: खोप अभियान सञ्चालनमा आउने बारे अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी गराएको छ ।
अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौंबाट जनशक्ति व्यवस्थापन हुने भएकोले नियमित रुपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताइएको छ ।
पछिल्लो समय नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितका कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि खोप लगाउनेहरुको भीड अस्पतालमा बढ्न थालेको छ ।
अस्पतालका ५० बढी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएपछि सोमबारदेखि खोप अभियान रोकिएको थियो।
माघ १०, २०७८ सोमवार २०:४१:३५ बजे : प्रकाशित